စံကားပန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
(စကားပန်း မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
စကားပင်သည် အမြင့်ပေ ရှစ်ဆယ်ထိ တက်သော အမြဲစိမ်းလန်းသည့်အပင်မျိုးဖြစ်သည်။ အရွက်မှာ သရက်ရွက်ပုံနှင့် တူလေသည်။ အသားထူသည်။ ဤစံကားမျိုးမှာ စံကားဝါမျိုးဖြစ်၍ စပ္ပာဟုလည်းခေါ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ရုက္ခဗေဒအမည်၌ ချမ်ပါကာဟူသော စကားကို တွေ့ရသည်။ စာပေကျမ်းတို့၌ စံကားဝါ၊ စံကားဖြူ၊ စံကားနီ၊ စံကားစိမ်းဟု လေးမျိုးပြဆိုရာ စံကားစိမ်းအား အခြားစံကားများနှင့် မျိုးမတူချေ။ တရုတ်စံကားဟုခေါ်ကြသော စံကားပင်မှာလည်း စံကားဝါ၊ စံကားဖြူ၊ စံကားစိမ်းမျိုးရင်းထဲတွင် မပါဝင်ချေ။ စံကားဝါမျိုးရင်းဖြစ်သော စံကားပင်သည် သမိုင်းဝင်ဖြစ်သည်။ ပန်းပဲမောင်တင့်တယ်ကိုကားတင်၍ စီရင်ရာ၌ စံကားပင်တွင် စီရင်သည်။ စံကားသားကို မောင်းတင့်တယ်တို့ နတ်မောင်နှမအရုပ်ထုလုပ်၍ ပုပ္ပားတောင်၌စံစေသည်။
စံကားပန်းပင်သည် 'မက်ဂနိုလီးအေးစီအီး'(Magnoliaceae)မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သည်။ ရုက္ခဗေဒအမည်မှာ 'မိုက်ကယ်လီယာ ချမ်ပါကာ'(Michelia champaca; ယခုအခါတွင် Magnolia champaca) ဖြစ်သည်။ စံကားကို စံကားဝါဟူ၍လည်း ခေါ်သည်။ စံကားပင်သည် အမြဲစိမ်းလန်းသော အပင်မျိုးဖြစ်သည်။ အမြင့်ပေ ၈ဝ ရှိ၍ အရွက်နှင့်အကိုင်း အုပ်ဆိုင်းဆိုင်းရှိသည်။ အရွက်မှာ သရက်ရွက် ပုံသဏ္ဌာန်ရှိ၍ အလျား ၉ လက်မ ရှိသည်။
အပွင့်မှာအဝါရောင်၊ သို့မဟုတ် လိမ္မော်ရောင်ရှိ၍ အလျား ၂ လက်မ ရှိသည်။ အလွန်မွေးကြိုင်သည်။ အသီးသည် လုံး၍ အထဲ၌ အညိုစေ့ကလေးများကို မြင်နေရသည်။ စံကားပင်သည် ကြီးခဲသောအပင်မျိုး ဖြစ်သည်။ မြေဆီလွှာ နက်နက်နှင့် စွတ်စို သော ရာသီဥတုကို နှစ်သက်သည်။ ပေ ၅ဝဝဝ ထိမြင့်သော တောင်ကုန်းများတွင် ဖြစ်ထွန်းသည်။ မျိုးစေ့များကို စိုက်ပျိုး သောအခါ မိုးဦးကျအချိန်တွင် စိုက်ခင်းများတွင် ကြဲဖြန့်၍ စိုက်ပျိုးရသည်။ ပျိုးပင်များကို ၂ နှစ် တိုင်တိုင် ပြုစုထားရ သည်။ စိုက်ပျိုးပြီးနောက် ပထမ နွေရာသီတွင် ရေလောင်းပေး ရန် လိုသည်။
စံကားသားသည် အိမ်ထောင်ပရိဘောဂများ ပြုလုပ်ရန် အတွက်ကောင်းသည်။ အခေါက်သည် ဆေးဖက်ဝင်သည်။ အပွင့်မှရသော အဆီကို ရေမွှေးလုပ်ရသည်။
စံကားပင်များသည် ဟိမဝန္တာ အရှေ့တောင်တန်းများ၊ အာသံပြည်နယ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့တွင် အရိုင်းပေါက်ကြသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ထိုအပင်ကို စိုက်ပျိုးယူကြသည်။ စံကားဖြူသည် စံကားနှင့် မျိုးရင်းတူ ဖြစ်သည်။ ယင်း၏ ရုက္ခဗေဒအမည်မှာ 'မိုက်ကယ်လီယာ အိပ်ဆယ်လဆာ'(Michelia excelsa (Wall.) Blume; ယခုအခါတွင် Magnolia doltsopa) ဖြစ်သည်။
စံကားစိမ်းသည် စံကားနှင့် မျိုးရင်းမတူချေ(Annonaceae)။ ယင်း၏ ရုက္ခဗေဒအမည်မှာ 'ကန်နန်ဂျီယမ် အိုဒိုရာတမ်'(Canangium odoratum; ယခုအခါတွင် Cananga odorata) ဖြစ်သည်။ စံကားစိမ်းပန်းကအဆီကို ရေမွှေးလုပ်သည်။
တရုတ်စံကားပင်သည် စံကားဝါ၊ စံကားဖြူ၊ စံကားစိမ်း မျိုးရင်းတို့အထဲမှ မဟုတ်ချေ(Apocynaceae)။ ယင်း၏ ရုက္ခဗေဒအမည်မှာ 'ပလူမေးရိယာ အကျူမီနေတာ'(Plumeria acuminata; ယခုအခါတွင် Plumeria rubra)ဖြစ်သည်။ ထိုအပင်သည် တောင် အမေရိကတိုက်တွင် မူလပေါက်သည်ဟု ဆိုသည်။ အကိုင်းမှ ဖြာထွက်လာသော အခက်တို့၌ လိမ္မော်ရောင်အပွင့်များ ပွင့် သည်။ အပွင့်သည် မွှေးကြိုင်သည်။ အခန်းများတွင် အများ အားဖြင့် အရွက်မရှိချေ။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Govaerts, R, Figlar, R., Nooteboom, H. & Spongberg, S. (2019). World Checklist of Magnoliaceae. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; http://wcsp.science.kew.org/ Retrieved 17 December 2019
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စံကားပန်း&oldid=618899" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၁၂:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။